Imishado eDenmark IMIHLA NGE-DENMARK
Singabantu inkampani esekelwe eDenmark, eJalimane naseSpain, eyasungulwa nguNkk Natascha Rode. Ngaphansi kobuholi bakhe, siye sahlela ngempumelelo imikhosi yomshado eDenmark kusukela ngo-1992. Imibiko emihle emaphephandabeni ahlukahlukene aseJalimane (i-Süddeutsche, i-Hamburger Abendblatt, i-TAZ, njll) kungenzeka isaziwa kakade. Isidingo esikhulu esivela kubantu siye sabonisa ukuthi umqondo wethu wawungowona futhi ulungile. Sizibophelele ekudumeni kwethu okuhle futhi sihambe nezicelo ezikhethekile ezifinyelelekayo!
Siyazi izinkinga zokushada nemibhangqwana yaseBermany - ngisho nasezimpikeni ezinzima - ngakho-ke siyakwazi ukuphendula ngokukhathazeka kwakho okuqondile futhi sikunike iseluleko esiqondile. Ngenxa yobuhlobo bethu obuhle nezikhulu zaseDenmark namahhovisi okubhalisa, kanye nolwazi lwethu oluhle lwe-0 nomyalo ophelele wolimi lwesiDanishi, singenza umshado wakho ube nakho okungafani, ngokuvumelana nezifiso zakho.